Farqiga u dhexeeya waraaqda 'Synthetic paper' iyo 'PP'
1 Waa dhamaan qalabka filimka. Waraaqda macmalka ahi waa cadaan. Cadaanka ka sokow, PP sidoo kale wuxuu leeyahay saameyn dhalaalaysa oo ku saabsan maaddada. Ka dib marka la dhajiyo warqada Sintetiga ah, waa la jeexi karaa oo la dhajin karaa. Laakiin PP mar dambe lama isticmaali karo, maxaa yeelay dusha sare ayaa ka soo muuqan doona diirka liinta. Sababtoo ah Synthet ...
PP / PET / PVC Filimka Holographic Isku-dhejiska Isku-duubka ah ama Xaashida ah
Sharaxaadda sheyga Waxyaabaha loo yaqaan 'PET / PVC / PP Holographic Adhesive Water base / dhalaal kulul / xaashida laga saari karo xajmigeeda A4 A5 ama sida ku cad cabbirka duub Width laga bilaabo 10cm ilaa 108cm, dherer ahaan 100 ilaa 1000m ama sida ku cad shuruudaha Wax soo xirxirida Xoog PE coa .. .
sumadaha iyo istiikarada
Calaamadaha iyo istiikarada Waa maxay farqiga u dhexeeya istiikarada iyo sumadaha? Istiikarada iyo sumadaha labaduba waa ku dheggan yihiin, waxay leeyihiin sawir ama qoraal ugu yaraan hal dhinac, waxaana lagu samayn karaa waxyaabo kala duwan. Labaduba waxay ku yimaadaan qaabab iyo cabbirro badan - laakiin dhab ahaan ma jiraa farqi u dhexeeya labadaas? Nin ...
Noocyada dusha sare ee PVC
Transparent, white glossy, matte white, madow, jaalle, casaan, buluug hufan, cagaar hufan, buluug qafiif ah, buluug madow iyo cagaar madow. Qalabka dusha sare waa kuwo aan dabool lahayn, dhumucdiisuna waxaa loo dooran karaa 40um, 50um, 60um 80um, 100um, 150um, 200um iyo 250um iwm.
Noocyada qalabka dusha sare ee PET
Transparent, matte transparent, glossy white, white gloss, white glossy, silver matte, dahab dhalaalaya, lacag caday, dahab caday. Dhumucda qalabka dusha sare waxaa loo dooran karaa 25um, 45um, 50um, 75um iyo 100um iwm. Daaweynta dusha sare Ma jiro wax daaweyn ah ama biyo ku saleysan. Khamriga u adkaysta iyo fricti ...
Sumadda kiimikada maalinlaha ah
Wax soo saarka kiimikada maalinlaha ah waxay xiriir dhow la leeyihiin nolol maalmeedkeena. Sida daryeelka timaha, daryeelka shakhsiga ah iyo daryeelka dharka iyo wixii la mid ah, maxaa abuura qiimo u leh nolol wanaagsan, halka summaddu ay alaabtu ka sii qurux badnaato, gudbiso dhaqanka sumcadda isla markaana u xagliso macaamiisha. Talo soo jeedinta: (85μm Glossy iyo White PE / ...
Qirasho ka timid calaamadaha caafimaadka – Shawei Digital
Markuu Coronavirus yimaado, maaddooyinka ladagaalanka cudurada faafa ee aad ogtahay inay kujiraan waji, dhar difaac, kareem gacmeed… Laakiin dowlada ayaa si rasmi ah u sheegtay in sumadaha sidoo kale ay yihiin qalab caawinaada ladagaalanka faafa. Waxaa laga yaabaa inaad wareerto oo aad rabto inaad ogaato sababta？ Aan dhageysano ...
Sumadda la saari karo waxay isticmaashaa xabagta la saari karo, waxaa sidoo kale loo yaqaanaa jawi bey'adeed, waa laga saari karaa marar badan waxayna leedahay haraaga. Si fudud ayaa looga saari karaa hal warqad gadaal ah oo waxaa lagu dhaji karaa warqad kale oo dhabarka ku dheggan, sumadda ayaa xaalad wanaagsan ku jirta, marar badan ayaa dib loo isticmaali karaa. Raadinta ...
Iibinta Kulul: taxane lagu buufiyay maro madow iyo caddaan ah - Caddayn iftiin leh!
Dharka lagu buufiyo ayaa ku kala duwan waxqabadka iyo isticmaalka. Waxaa lagu kala saari karaa dhumucda, fudaydka iyo qalabka, iwm. Hordhaca Alaabada Marada madow iyo tan cad waxaa sidoo kale loo yaqaan maro madow sanduuqa iftiinka gadaashiisa ama maro madow.Waxay kululeyneysaa labada lakab ee kore iyo hoose ee filimka PVC-ga ah, ...
Waxyaabaha loo yaqaan 'Inkjet PP'
Magaca macluumaadka aasaasiga ah: Mashiinka 'inkjet' PP Qaab dhismeedka: Waraaqda 'PP + + biyuhu' Inkjet-ka 'oo aan biyuhu daboolanayn Dhumucda alaabada la dhammeeyay: 80um / 100um Waxyaabaha soosaarka 1. Ku habboon daabacayaasha desktop, sida Epson global, India Technova, England Afinia, China Trojanjet, iyo US Quick. Calaamadda iwm. 2. Econo ...
Waxaa loo qeybiyay labo nooc: Calaamada waraaqaha, Summada Filimka. 1. Sumadda warqadda waxaa badanaa loo isticmaalaa alaabada dareeraha dhaqda iyo alaabada daryeelka shaqsiyadeed ee caanka ah; Qalabka filimka waxaa badanaa loo isticmaalaa alaabada kiimikada ee maalinlaha ah. Waqtigan xaadirka ah, alaabada daryeelka shakhsi ahaaneed ee caanka ah iyo dareeraha guryaha lagu dhaqo ...
Tilmaamaha Wax Soo Saarka: 1) vinyl koollo ah oo goynta nabarrada dhalaalaya iyo kuwa jilicsan labadaba. 2) Xakamaynta cadaadiska xabagta xasaasiga ah ee xasaasiga ah. 3) Warqad PE-dahaarka Silicon Wood-Pulp Paper. 4) Filimka jadwalka taariikhda loo yaqaan 'PVC calendared'. 5) Ilaa 1 sano adkeysi. 6) Cadaadis xoog leh iyo iska caabin cimilada. 7) 35 + midab oo lagu xusho 8) Transluce ...
Maamulaha iibka waaxda caalamiga: SW Label
Farqiga u dhexeeya warqadda 'Synthetic paper an ...
Waad ku mahadsan tahay inaad noo soo dirto macluumaadka waana kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan